Uvimba wolondolozo lweziganeko ekuhlaleni »IYunivesithi yaseHodges
Ukwamkelwa - iiHawks zexesha elizayo
Ulwazi lwezeMali zabafundi
Ufundiso kunye neMali
Ukwahluka ku-Ed oPhezulu
Ukuqhelaniswa kwabafundi abatsha
Ikhathalogu yezifundo yangoku
ImiGaqo yokuBhalisa neMiqathango
Iifomathi zokuHanjiswa kweDigri
Funda ngabasebenzi bethu
Udidi: Imicimbi yoLuntu
Joyina iDrive yethu kunye neDrive Donation Drayivu
Ubomi bekhampasi, Imicimbi yoLuntu
Joyina iDrive yethu yoLuntu kunye neNkxaso yoMntu Masixhase uluntu lwethu kwaye sincede abanye! IYunivesithi yaseHodges ibambisene neHarry Chapin Food Bank kunye neBrooke's Legacy Animal Rescue, ukuqokelela izinto kwiintsapho ezisweleyo kunye nabahlobo bethu abanoboya. Sijoyine ngokunikela nge-1 kaJuni-15 kaJuni ka-2020. Unokwenza i [...]	Funda Okuninzi
Unganceda! Ukuqokelelwa kweNkanyamba uDorian yoNcedo lweBahamas
I-Stilwell Enterprises kunye neYunivesithi yaseHodges Joyina iinzame zoNcedo lweBahamas INkanyamba uDorian yachitha iBahamas, kwaye abahlali balapho bafuna uncedo kakhulu. IYunivesithi yaseHodges iFort Myers kunye neekhampasi zaseNaples zindawo zokuhla zeBahamas zoNcedo. Izinto esiziqokelelayo ziya kusiwa ngqo kwiBahamas, ngoncedo lweStilwell Enterprises. IiHodges [...]	Funda Okuninzi
UZonta Honor kunye noMsitho wokuXhobisa Impumelelo
Iklabhu yaseZonta yeNaples 'yokuHlonipha nokuXhobisa ebibanjelwe kwiYunivesithi yaseHodges ibe yimpumelelo enkulu! Iinkokheli zoluntu kunye nabathathi-nxaxheba bahlanganisana kwiNkampu yethu yaseNaples nge-18 ka-Epreli 2018, ukufunda okungakumbi malunga nokuzixhobisa ngokwabo kunye noluntu lwabo kumnyhadala wokuhlonipha nokuXhobisa uZonta. IHodges 'iyavuya ukubamba lo msitho ngokusebenzisana no [...]	Funda Okuninzi
Abaqeshwa baseYunivesithi yaseHodges banikela ngaphezulu kweethoyi ezingama-500 kwiithoyi zeetotshi
Abaqeshwa baseYunivesithi yaseHodges banikela ngaphezulu kweethoyi ezingama-500 kwiiToys zeTots Qho ngonyaka, abasebenzi baseYunivesithi iHodges babhiyozela iiholide ngokunika abantwana. Kulo nyaka, bavule iintliziyo zabo ngokubanzi kwaye banikela ngaphezulu kwe-500 zamathoyizi kwiiToys zeTots. "Ububele babo bonke ubuchule bethu kunye nabasebenzi kuyakhuthaza," utshilo uGqirha John Meyer, umongameli, [...]	Funda Okuninzi
IHodges U Ikhokelela kwiNdlela eneeDigri zekhompyuter
IiHodges zokudibanisa zinceda ukugcwalisa izithuba zeZakhono zabasebenzi
IHodges U Ebizwa ngokuBalaseleyo kwiiVets 2020
IYunivesithi yaseHodges ibhengeza iHodges Connect
IFakhalthi kunye nabasebenzi
IFORERS MYERS CAMPUS
I-4501 yeColonial Blvd Fort Myers, eFlorida 33966
Inkxaso yeeHodges U Xa uthenga iAmazon!
Cofa kwikhonkco elingezantsi xa uthenga eAmazon kwaye unikele ngenxalenye yentengo yakho kwingxowa yeHodges Hawks!
© Ilungelo lokushicilela kwiYunivesithi yaseHodges 2018-2021 | umthetho wabucala | Ulwazi loMthengi | IYunivesithi yaseHodges yamkelwe ngokwengingqi nguMbutho waseMzantsi weeKholeji kunye neKhomishini yeZikolo kwiiKholeji zokuwonga amaqabane, iziqu zesidanga sokuqala kunye nezidanga zemasters. Ngemibuzo malunga nokuvunywa kweYunivesithi yaseHodges, nxibelelana neKhomishini yeeKholeji e-1866 emazantsi eLane, eDecatur, eGeorgia 30033-4097 okanye utsalele umnxeba (404) 679-4500. Yonke eminye imibuzo malunga neenkqubo zemfundo zeYunivesithi yaseHodges, iimfuno zokwamkelwa, uncedo lwezemali, njl. Ikharityhulamu yenkqubo nganye yezonyango kwiYunivesithi yaseHodges iyahlangabezana neemfuno zelayisensi yobungcali kwilizwe laseFlorida. Ezi nkqubo zeklinikhi zibandakanya uMphathi wezeNzululwazi ngezeMpilo yoNyango ngezeMpilo, isiDanga sezeNzululwazi kwezoNesi, uMdibanisi weSayensi kuMncedisi wezoNyango, isiQinisekiso kwiNgcali yoNyango oluNgxamisekileyo, iSatifikethi kwiiParamedics, kunye neSatifikethi kubuNesi obusebenzayo. IYunivesithi yaseHodges khange yenze isigqibo sokuba ingaba ezi nkqubo, zidweliswe apha ngasentla, ziyahlangabezana neemfuno zelayisensi yezinye iindawo. Abafundi abaceba ukufuduka ngaphandle kweFlorida kufuneka baqinisekise ukuba ikharityhulamu iyahlangabezana neemfuno zikarhulumente.
Sisebenzisa ii-cookies kunye nezinye izixhobo zokuqokelela idatha ukwenza olona luvo lusebenzayo lomsebenzisi, ukuqonda ngcono ukuba zisetyenziswa njani nceda undwendwele iphepha lethu lomgaqo-nkqubo wabucala Ngokuqhubeka nokusebenzisa le ndawo usinika imvume yokwenza oku. Ukuya kuthi ga ngoku kummiselo wokuKhuselwa kweDatha ngokuBanzi ("GDPR") kum, ngokundwendwela le webhusayithi ndavuma ke ukuba kulungiswe idatha yam njengoko kuchaziwe yi-GDPR ngeenjongo ezichaziweyo kwaye zibonelelwa kwimigaqo-nkqubo kaHodges, njengoko ilungiswa amaxesha ngamaxesha. Ndiyaqonda ukuba kwiimeko ezithile, ndinelungelo lokuphikisa ekuqhubekekeni kweDatha yobuqu. Ndiyaqonda ngakumbi ukuba ndinelungelo lokucela (1) ukufikelela kwiDatha yoBuntu; (2) ukulungiswa kweempazamo kunye neempazamo kunye / okanye ukucinywa kweDatha yobuqu; (3) iiHodges zithintela ukuqhubekeka kweDatha yobuNtu; kwaye (4) iiHodges zibonelela ngeDatha yobuNtu xa ziceliwe kwifomathi ephathekayo.